वर्षा शिवाकोटीले किनिन् यति महंगो अपार्टमेन्ट, कति हो मुल्य ? भन्छिन् ‘सपना पुरा भयो’ - टि. एल. एन पोस्ट
Home फिल्म सेलिब्रेटी वर्षा शिवाकोटीले किनिन् यति महंगो अपार्टमेन्ट, कति हो मुल्य ? भन्छिन् ‘सपना...
नेपाली कलाकारहरुले पनि राम्रै आम्दानी गर्न थालेका छन् भन्ने उदाहरण उनीहरुको जिवनशैलीले देखाएको छ । नायीका पुजा शर्माले आफ्नै कमाइले घर बनाइन्, गाडी किनिन् । अहिले अर्की नायिका वर्षा शिवाकोटी पनि निकै महंगो अपार्टमेन्ट किनेकी छन् । वर्षा अहिले फिल्मभन्दा अन्य कुराले पनि चर्चामा छिन् । प्रेमी राज कट्वालसँगको उनको म्युजिक भिडिओको चर्चा अहिले फिल्म नगरीमा व्याप्त छ ।
यही क्रममा वर्षालाई चर्चित बनाउने काम गरेको छ उनले यसैसाता खरिद गरेको महंगो अपार्टमेन्टले । वर्षाले ललितपुर हात्तीवनस्थित सिटी स्केपमा २ करोड ५० लाख मूल्य तिरेर अपार्टमेन्ट खरिद गरेकी छिन् । गतसाता खरिद गरेको उक्त अपार्टमेन्टमा साइत हेराएर आज बुधबारदेखि उनी गृहप्रवेश गरिन् । अपार्टमेन्टमा उनले पूजापाठ गरेर सामान पनि सारेकी छिन् । अहिले भक्तपुर कौशलटारमा बस्दै आएकी वर्षा बुधवारदेखि आमासँग उक्त अपार्टमेन्टमा बस्नेछिन् । अ
‘लामो समयदेखिको मेरो सपना पुरा भएको छ’ वर्षाले भनिन् । केही समय अघि कार समेत किनेकी वर्षाले निषेधाज्ञा सुरु भएपछि अपार्टमेन्ट खरिद प्रक्रिया थालेकी थिइन् । वर्षा अभिनित चार फिल्म अहिले रिलिजको तयारीमा छन् । जसमा लक्का जवान, परदेशी २, मनसँग मन र ए साथी सुन छन् ।
Previous articleमानुषी लघुवित्तको आइपीओले कति पाउला ओपनिङ्ग रेञ्ज ?
Next articleचर्चित मोडल निशा घिमिरेको उपचारको क्रममा निधन
बिरामीलाई अक्सिजन ल्याउन लगाउने अस्पताललाई कारबाही हुने